न्यायाधीश शर्माविरुद्धको रिट खारेज| Nepal Pati
ओली प्रचण्डबीच बाहिर आएको जस्ताे विवाद छैन: नेता पौडेल
तरुणको गुटगत भेला, स्थापना दिवस पनि छुट्टाछुट्टै
नेकपामा समानान्तर छट्पटी, अनिष्टको सङ्केत
हाम्रो सहमति छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छ: प्रचण्ड
नकारात्मक सन्देश फैलाएको आरोपमा गायक दुर्गेश थापा पक्राउ
न्यायाधीश शर्माविरुद्धको रिट खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको योग्यतामाथि प्रश्न उठाई दर्ता भएको रिट प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले मंगलबार रिट खारेज गरेको हो । निवेदनमाथि कारण देखाउ आदेशसमेत जारी भएन ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले गत साता सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए । एक सातापछि सोमबार मात्रै रिट दर्ता भएको थियो । उक्त निवेदनमा न्यायपरिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद्, त्यसको सचिवालय, संसदीय सुनुवाइ समिति, राष्ट्रपति कार्यालय र न्यायाधीशमा नियुक्त मनोजकुमार शर्मालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
२०७५ चैत १९ गते न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि ५ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये शर्माको नाम विवादित बनेको हो । निवेदकद्वयले संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत शर्माविरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।
रिटमा नवनियुक्त न्यायाधीश शर्मालाई संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको योग्यता, क्षमता र दक्षता नभएका व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरिएको थियो । रिटमा न्यायपरिषदको नेतृत्व र त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई ‘राणाकालका श्री ३ महाराजले झैं कार्यशैली अपनाउन खोजेको’ आरोप लगाइएको छ । निवेदनमा भनिएको थियो, ‘कानुनी राजमा न्यायाधीश यस्तो पद होइन कि श्री ३ महाराजबाट आफ्नो पगरीको उत्तराधिकारी जसलाई पहिर्‍याउने इच्छा बक्स हुन्छ, उसैलाई उत्तराधिकारी घोषित गर्न सकियोस् ।’
संविधानको धारा (१२९ -५) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कानुनमा स्नातक भई उच्च अदालतको मुख्य वा न्यायाधीशमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक भई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतले निरन्तर १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । नभए १५ वर्ष निरन्तर न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको अनि ख्याति वा न्यायसेवाको सहसचिव वा माथि १२ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । शर्मासँग यी कुनै योग्यता नभएको दाबी निवेदनमा थियो ।
निवेदनमा उल्लिखित विवरणअनुसार काका दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला शर्मा २०७० जेठ २७ गते पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि उनले अस्थायी नियुक्तिमा निरन्तरता नभई पदमुक्त भए । निवेदनमा भनिएको थियो, ‘उच्च वा तत्कालीन पुनरावेदनमा ५ वर्ष नपुगी सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न मिल्दैन । कानुन व्यवसायीबाट लैजान १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको व्यवस्था अखण्डित हुनुपर्छ ।’
शर्मा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनको नियुक्ति खण्डित भइसकेको विवरण रिटमा पेस भएको थियो ।
काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षति भएको सिंहदरबारको पश्चिम...
काठमाडौं । नेपाल तरुणदलमा विवाद चर्किदै गएको छ । अ...
समस्या पछि समस्यामा पर्दै आइरहेका पूर्व सभामुख महर...
समस्या पछि समस्यामा पर्दै आइरहेका पूर्व सभामुख महरा र काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद ...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधहरुले खाँदै आएको तलवभत्ता रोक...
फेरी आन्दोलन गर्ने इच्छा छ, साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ: अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फ...
एक कल फोनसँगै छाएको त्यो सन्नाटा ‌
शनिवारको दिन । अफिसको बिदा । काठमाडौको खाल्डोबाट बाहिर जाने निधो गरियो । मेरा अ...
गिरीको समाजवाद, ओलीको समृद्धि र सी’को उपदेश !
विश्व राजनीतिले मात्र हैन नेपाली राजनीतिले समेत अत्यन्त रुचाएको शब्द हो, समाजवाद...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको आलोचना गर्नेहरु प्रति आक्रोश व...
सेति अञ्चल अस्पतालका कार्यरत बाल रोग बिशेषज्ञ डा. शाहको निधन
काठमाडौं । सूदुरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशीक अस्पतालमा कार्यरत बाल रोग विशषेज्...